Khabiirka Kala Duwan: Isticmaalka Bandhiga
Maskaxda bini'aadamka ayaa la ogyahay in ay ka shaqeyneyso qaababka si dhakhso ah marka loo eego qoraalka caadiga ah Tani waxay sharraxaysaa sababta ay ufilan tahay sawirada ama sawiradu waxay helayaan boqolkiiba 94 fikrado badan marka la barbar dhigo nuxurka qoraalka caadiga ah. Isticmaalka sawirada habboon ee mawduucaaga ayaa soo jiidanaya akhristayaasha waxayna ka caawineysaa iibinta alaabtaada. Tan ugu muhiimsan, sawirada waxay kor u qaadaysaa waayo-aragnimada user taas oo muhiim ah marka ay timaado SEO. Hadda waxaad ogtahay in sawiradu ay yihiin qayb muhiim ah oo ku yaal goobtaada, waxaa muhiim ah in laga faa'iideysto - temperature monitoring manufacturers.
Waa kuwan sidan siddeed jeer oo tijaabooyin ah oo laga helay Lisa Mitchell, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Macaamiisha, sida loo qaabeynayo sawirada si loo helo liisas ka wanaagsan:
1. Aqoonsadaan oo isticmaalaan sawirada saxda ah
Muujiyeynta sheekada sheekada, natiijada, waxaa muhiim ah in la hubiyo in sawirada aad isticmaashid ay ku habboon yihiin mowduuca gacanta. Marka aad geliso muuqaalo aan ku habboonayn waxyaabaha ku wareegsan, waxaad u soo dirtaa calaamado isku dhafan oo ku soo booqda martidaada. Sababtoo ah shaxanka waxaa loola jeedaa in lagu caawiyo hagaajinta darajadaada, haddii aanay ku haboonayn mowduuca, waxay luminayaan qiimaha SEO-ga loogu talagalay.
Marka ay timaaddo helitaanka sawirada haboon, waxaad haysataa fursado badan. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Sawirada asalka ah: Sawirada aad sawir qaadid adigoo isticmaalaya telefoon ama kamarad.
Sawirro muuqaal ah: Waxaad ka heli kartaa sawirro kayd oo laga helayo goobaha sawirrada CCO-ruqsadaha leh oo ay ku jiraan Unplash iyo Pixabay. Haddii kale, waxaad u-qortaa dalabyada qiimaha ah ee ku yaalla goobahaas iyo kuwa kale oo ay ku jiraan iStock iyo Shutterstock.
Sawirada isbeddelka sawirada (GIF) Sawirrada: Kuwani waa sawirro loo isticmaalo dhejiyado gaaban oo isku dhafan oo ku daraya qoto dheer iyo sidoo kale danahaaga maadada. Waxaad GIFs ka heli kartaa GIPGY ama abuuri kartaa adigoo isticmaalaya app. Haddii kale, waxaad fiirin kartaa GIFMaker ama ScreentoGIF.
Qalabka naqshadaynta: Shabakadaha sida PicMonkey iyo Canvas waa kheyraad aad u fiican oo abuuraya sawiradaada
2. Ku dar ereyada muhiimka ah ee faylka sawirka
Iyadoo mashiinka raadinta s ay ku fiicanyihiin waxa ay sameeyaan, ma arki karaan sawirrada waxayna u baahan yihiin qoraalo sharaxan si ay u sheegaan waxa sawirrada ku jira. Maadaama muraayadaha sawirada, kamaradaha iyo ilaha kale ee muraayadaha lagu qoro faylasha aan loo isticmaalin sawirada aan ka caawinayn matoorada raadinta si ay u fahmaan garaafka, waxaa muhiim ah in dib loogu magacaabo garaafka aad doonayso inaad u gudbiso goobtaada
Magaca la soo rogay ayaa sheegaaya mashiinka raadinta waxa sawirku dhan yahay iyo sidoo kale wuxuu ku siinayaa fursad aad ku isticmaasho erayga muhiimka ah ee aad ku fiicnayd.
3..Qoraal kale ama qaabka qoraalka hoose
Qoraal kale oo caadi ahaan loo yaqaano qoraalka kore waa muuqaal ku yaal boggaaga oo tallaabo ka sii hormarinaya oo kaliya marka la eegayo faylalka. Muujintu waxay kuu ogolaaneysaa inaad sharaxdo mawduuca oo sawir ka dhigto bogga. Qalabkan waxaa isticmaala matoorada raadinta si loo ogaado xiriirka u dhexeeya faylasha galka iyo content. Waxa kale oo ay ka caawisaa inay ogaadaan nooca sawirada ugu haboon inay soo bandhigaan marka laga jawaabayo su'aalaha raadinta
4. Isticmaal xarfaha si haboon
Calaamaduhu waxay muhiim u yihiin markay ka caawiyaan inay ku daraan jawi dheeraad ah qoraalka ku habboon. Sida caadiga ah, dadku waxay akhristaan ​​qoraalo marka ay wax ku baarayaan bog. Celcelis ahaan, xarfaha ayaa lagu aqriyaa 300 jeer ka badan marka loo eego nuqulkii ugu muhiimsanaa. Si kastaba ha noqotee, lama maarmaan ah in lagu daro qoraalo kasta oo garaaf leh illaa inta uu qoraalka ku hareeraysan yahay
5. Isticmaal nooca file image ee ku habboon
Inkastoo ay jiraan noocyo dhowr ah oo faylasha sawir ah ee loo isticmaalo, laba habood oo caan ah ayaa ah Bandhigyada Shabakada Korjoogteynta (PNG) iyo Kooxda Jilayaasha Sawirada Joint (JPEG). Farqiga weyn ee u dhaxeeya PNGs, JPEGs, iyo GIFs waa cabbirka iyo tayada. Cabbirka faylka ayaa muhiim u ah SEO maxaa yeelay waxay saameysaa waqtiga bogga.
6. Yaree faylka image image
Maadaama mugga sawirada waaweyn uu saameyn ku yeesho marxaladaha bogga, waxaad u baahan tahay inaad yareyso marka loo baahdo. Tani ma aha oo kaliya hagaajinta marxaladaha bogga laakiin sidoo kale keydinta bandwidth iyo kaydinta server. Waxaad hoos u dhigi kartaa cabbirka muuqaalka adoo isticmaalaya qalabyada qalabyada ama dooro qalabyada internetka sida CompressJPEG, TinyPNG iyo Optimizer Image
7. Dib u cusbooneysii sawirradaada
Xaaladaha qaarkood, yareeynta xajmiga feylka ayaa laga yaabaa inaanay ku filnayn, waana inaad dib u dhistaa. Tirinta sawiradu waxay hoos u dhigeysaa ballaca iyo dhererka sawirka waxayna yareyneysaa cabirka faylasha si loo hagaajiyo waqtiyada xaddiga bogga. Maskaxda ku hay in qaababka muuqaalka sida PGNs ay ka sii darayaan tayada marka dib loo sawiro.
8. Abuuraan qulqulka bogagga
Website-yada waxay bixiyaan farsamoyaq raadiyaha leh macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhismaha boggaaga iyo hagaajinta darajooyinka mashiinka raadinta. Soodejiyada waxaa ka mid ah liiska bogagga shabakadaada, metadata ku xiran iyaga iyo sida loo abaabulo.
Ugu dambeyntii, sawiradu waxay kobcin karaan ama joojin karaan dadaalkaaga SEO. Si aad u hagaajisid darajooyinkaaga, waxaad u baahan tahay inaad gartid sawirada saxda ah, ay sare u qaadaan, u sharax sawirada si sax ah una abuur bogagsi si aad u kobciso waayo-aragnimada martida iyo hagaajinta darajadaada raadinta.